अख्तियारमा उजुरी हाल्ने किन बढे ? – समावेशी
अख्तियारमा उजुरी हाल्ने किन बढे ?
बिहिबार, भाद्र १८, २०७७ | १३:०६:१८ |
काठमाडौं । पुरानो आर्थिक वर्ष सकिएर नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि अख्तियारमा पर्ने उजुरीको संख्या २५ प्रतिशतका दरले बढेको हो । विभिन्न स्थानीय तह र सरकारी निकायमा असार मसान्तको भुक्तानीको काम सकिएपछि त्यसबाट असन्तुष्ट हुनेहरुले विभिन्न विषय इंगित गर्दै अख्तियारको ढोका ढक्ढक्याएका हुन् । अचम्म कस्तो छ भने, प्रशासनिक कडाइका कारण मान्छेहरुको सहज आवत–जावत छैन । तर, अनियमितता हेर्न र भोग्न नसकेका मान्छेहरु जस्तै कष्ट व्यहोरेर पनि उजुर हाल्न अख्तियार पुग्ने रहेछन् । घर बस्यो, अनलाइनबाट उजुर ठेल्यो । यसअघिका साउन र भदौ महिनामा पनि उजुरीको चाप बढ्ने गरेको थियो । तर, यो वर्षको वृद्धिदर अघिल्ला वर्षभन्दा माथि रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
उता, अनुसन्धानको अंग पुगेकै छैन, सफाईको तरंगले बजार गर्मिएको छ, पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासम्बन्धी मुद्दामा । सेक्युरिटी प्रेस खरिदका नाममा ठेकेदारसँग कमिशनसम्बन्धी जिज्ञासा राखेको अडियो क्लिप सार्वजनिक भएपछि छानवीनमा सहजता आओस् भनी गोकुलले सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । फेरि पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा जान लागेको र त्यसअघि अख्तियारबाट मुद्दामा सफाई दिने तयारी भएको व्यापक अखबारबाजी भयो । तर, अख्तियारमा उनीबारे परेको उजुरीमाथि आधारभूत छानवीन पनि टुंगिएको छैन ।
आधारभूत छानवीन भन्नाले आरोप लागेको विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग गरिने सोधपुछ हो । अख्तियारले अहिलेसम्म न गोकुल, न फ्रेञ्च कम्पनीको एजेण्ट भनिएका विजय मिश्र– दुबैसँग बयान लिएको छैन । मुद्दा प्रहरी शाखामा छ । त्यहाँका एसपी प्रविण पोखरेल अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका छन् । यो प्रकरण अख्तियारमा प्रवेश गरेलगत्तै संसारभर कोरोनाको महामारी शुरु भइसकेको थियो । छानवीन प्रक्रिया शुरु गर्ने बेला हुँदा नेपालमै संक्रमण प्रवेशको खतराका कारण जनजीवन नियन्त्रित हुन थालेको थियो । त्यसपछि यथेष्ट छानवीन हुन नसकेको अख्तियारका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।